Home विचार/ब्लग बलात्कारीको प्रतिकार गर्ने कमला लाई मुद्धा लगाउने कि सम्मान ? हाम्रो...
हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भन्दा पनि नेपालमा बलात्कारको संख्या धेरै उचाइमा पुगिएको छ, यहि सन्दर्भमा धनकुटामा माहालक्ष्मीको वलत्कार गर्न आएका पुरुषलाई प्रतिकारको क्रममा हतियार उठाउदा ति महिला विरुद्ध मुद्धा दर्ताको विषयमा केहि शब्द लेख्न चाहेकि छु ।
कमलालाई सम्मान गर्नु पर्ने ठाउँमा कमला विरुद्ध आज मुद्दा दर्ता भएको छ । के अब बलत्कार गर्न आउदा चुप लागेर हामी महिलाले सहेर कति दिन बस्नुपर्ने हो ? के आत्मा सुरक्षा लागि प्रतिकार गर्न नपाउने हो ? यो देशको न्यायलयलाई मेरो प्रश्न?, कमला लाई जस्तै गरेर भोलि हामी कुनै पनि कोसैको आमा , कसैको बुहारी, कसैको चेलिबेटी, या जुनसुकै नारिहरुलाई कोहि नरपिचास यौनजन्य दुर्ववहार गर्न आए के हेरेर बस्नु ? आफ्नो रक्षाका लागि हत्यार उठाउनु भन्दा पहिला कमलाले पनि धेरै सोचेका थिए । हामि आफै मनन गर्न सक्छौ , कुनै पनि मानिसले आफ्नो आत्मा रक्षाको लागि हतियार उठाउन बाध्य त्यतिकै हुदैन र आबश्यक हुदैन,त्यहि दुर्ब्यबहार बाट जोगिन पीडितले आत्मा रक्षाका लागि हतियार उठाएका थिए । हाम्रो जस्तो देशको कानुन प्रकृतिक देख्दा सारै दुखलागेर आउछ ।
महिला संग घरपरिवार छोराछारी हुर्काउने, बढाउने, पढाउने र रखदेख गर्ने जिम्मेवारी एउटी महिलालाई धेरै जिम्मेवारीले बाधिरहेको हुन्छन । अहिले उनको झन्डै डेढ वर्षको छोरा रहेको बुझ्न आएको छ । यदि कमलाले आफुलाइ बलत्कार गर्न आएका पुरूषलाई आफ्नो रक्षाका लागि हतियार उठाउदा ज्यान गएको विषयलाई लिएर आज उसले जेल सजाय भोग्नु पर्दा उनको नाबालक छोराले आमाको काख खोसिनेछ । राम्रो शिक्षा दीक्षा आमाको माया ममता बाट टाढा रहनुपर्ने छ । मानसिक रूपमा ती बच्चाको असर पर्ने देखिन्छ , सजाय त आमाले मात्र होईन उनको नाबलक छोराले पनि भोग्नु परेको देख्छु । के यो सहि हो , मैले यो कुरा गरि रहदा महिलाअधिकार कर्मीले सम्झिनु होला । तर त्यस्तो विचार भएको मान्छे होईन या सरासर कमला अन्यायमा परेको देखेर चित्तबुझ्दो नलागेर मात्र लेखेकी हु बोलिरहेको छु ।
म पुरूषलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्छु जस्ले एउटी नारी लाई सम्मान गर्दछ । मलाई थाहा छ, पुरूष बिना मेरो जीवन अधुरो छ । पुरुषलाई पनि महिलाको आवश्यक छ महिलालाइ पनि भन्ने कुरा मैले राम्रो संग बुझेकी छु । यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन, आजलाई यतिनै काफि छ, किनकि कानुन सहि ठाउँमा लागू हुन पर्यो गर्नु पर्यो । घट्ना गत असोज २७ गते मंगलबार रातिको हो । धनकुटा नगरपालिक वडा नं १ का कमला गुरुङ आफ्ना ढेड वर्षका छोराका साथमा सुतिरहेका थिए । रातको समयमा लिल बहादुरले कमलाको घरमा गई ढोका फोरेर घरभित्र घुसेर जवर्जस्ति वलत्कार गर्न खोजेकोका थिए । ३० वर्षकी कमला गुरुङले आफुलाई वलत्कार गर्न आएका सोही स्थानका लिल बहादुर गुरुङलाई प्रतिकार स्वरुप खुकुरी प्रहार गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो ।
अहिले कमला विरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्धाको दर्ता भएको छ । म हाम्रो देशको न्यायलायलाई बिनम्र पुर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु , कमला बिरुद्द मुद्द दर्ता हॊइन सर सम्मान सहित् सबैले गौरबका साथ् सहयोग गरौ , म त यस्ता यौनपिपासु जस्ता अपराधीहरुलाई जन्म कैद वा फासी दिने व्यवस्था यो सरकारले छिट्टै कार्यन्वयन गरुन ।
Previous articleहराएका तथा चोरि भएका ३८ थान मोवायल फेला पारी सम्बन्धीत धनिलाई बुझाईयो
Next articleसगरमाथा आरोहण कोरोनाका कारण पहिलोपटक सुनसान ,
कामसूत्रको नयाँ भर्सनमा सन्नी लियोनी (फोटोफिचर)